Xukuumadda Soomaaliya oo ka hadashay dhagxaanta lagu jaray Isgoyska dabka | Banaadir Times
HomeUncategorisedXukuumadda Soomaaliya oo ka hadashay dhagxaanta lagu jaray Isgoyska dabka
Xukuumadda Soomaaliya oo ka hadashay dhagxaanta lagu jaray Isgoyska dabka
Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay in dhagxaanta Hay’adaha Amniga ku xireen Isgoyska dabka ee magaalada muqdisho uu keenay culeys dhanka dhaqdhaqaaqa Shacabka ah.
Afhayeenka Xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalmow ayaa sheegay in dib u eegis deg deg ah lagu sameyn doono tallaabadaas, sidoo kalena la xoojinayo amniga.
“ Go’aanka Isgoyska Dabka qeyb ahaan lagu xiray wuxuu abuuray culeys dhanka dhaqdhaqaaqa Shacabka. Inshallah dib u eegis deg deg ah ayaa lagu sameynayaa iyada oo had iyo jeer ahmiyadda la siinayo daryeelka shacabka ,lana sii xoojinayo adkeynta amniga ayuu yiri” Macalimow.
Wadooyinka jidcadayaasha ee ku yaal degmooyinka Gobolka Banaadir ayaa horay dowladda Soomaaliya ay ugu jartay dhagxaan waaweyn, hayeeshee weli ay muqdisho ka dhacayaan qaraxyada.
Previous articleTaliska Ciidanka Booliska Soomaaliya ayaa ka hadlay dil iyo dhaawac saakay wax kamid ah loogu geystay Haween la sheegay inay qeybta Nadaafadda ee Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya. Qoraal kooban oo kasoo baxay booliska ayaa waxaa lagu sheegay in koox hubeysan ay dishay Saddex Haween ah oo laba kamid ah xaamilo ahaayeen, waxaana lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen Al-Shabaab. “Booliska Soomaaliya ayaa baaraya dil loo gaystay Saaka 3 Dumar ah oo 2 ka mid ah ay Xaamilo ahaayeen, kuwaasoo ay toogteen Maleeshiyaad la rumaysan yahay inay Argagixiso yihiin. Ma ahan wax ku cusub Dadka Soomaaliyeed in Hooyooyin nolol u raadsanaya caruurtooda ay si arxan darro ah isaga dilaan Kooxaha Argagixisadda ah ayaa lagu yiri” Qoraalka booliska. Majirto cid shaagatay mas’uuliyada dilka saaka xaafada Warlaliska ee degmada Deeyniile Haweenka loogu geystay, hayeeshee Booliska Soomaaliya ay sheegeen inay baritan ku hayaan.
Next articleGuddoomiyaha Aqalka Sare oo ka horyimid hanaanka loo dhisay golaha addeega Garsoorka